Kasị nchịkọta Kashmir Tours
Ụbọchị 05 / 06 Days
| 094 njegharị
Okpueze India na obodo Northernmost State, Kashmir ziri ezi 'Heaven on Earth' (Bhu-swarga). Kashmir Tour packages na Srinagar nchịkọta dị mfe iji chọpụta ebe ndị mara mma nke paradaịs. Njem ntụrụndụ nke Pahalgam na-adọta Bollywood Movies ịgba, ya na Osimiri Lidder, ebe ndị mara mma na njem na ọnụ ụzọ ámá Amarnath Yatra a ma ama, ga-eme ka oge okpomọkụ gị. Họrọ Ngwongwo Kashmir kachasị mma dị ka ịchọrọ ma ị nwere ike ịnụ ụtọ ọtụtụ ebe na Kashmir dị ka Srinagar, Sonamarg, Pahalgam na Gulmarg.
DAY 01: Jide SRINAGAR
Mgbe ị rutere n'ọdụ ụgbọ elu Srinagar, ị ga-ahụ onye nnọchianya anyị, a ga-ebufekwa gị na họtel gị ebe ị ga-aga maka nbanye. N'ehihie ụtụtụ gaa nleta dị iche iche nke ụlọ Srinagar City-Shankaracharya na Mughal Gardens (Nishat Bagh na Shalimar Bagh). N'abalị na-anọ na nkwari akụ.
Mgbe ị na-eri nri ụtụtụ n'ụlọ nkwari akụ, n'ụtụtụ, a ga-achụga gị maka njem njem njem zuru ezu na Sonamarg.Sonamarg (Ala ahịhịa) - Ọ bụ ebe mara mma nke mara mma, nke dị na Sindh Valley, nke nwere okooko osisi, nke ugwu gbara gburugburu ma nọrọ na elu nke 2690 m n'elu elu igwe. Ndị njem nleta na-eleta ya ugboro ugboro, ọ dị ka ebe ya, ugwu ugwu na-ekpuchi elu igwe. Ọ bụ ebe dị jụụ na-agba gburugburu nke sycamore, ọla birch, fir na osisi fir na nke ikpeazụ na mpaghara Kashmir maka njem si Srinagar gaa Leh. Ọ bụkwa isi maka njem ndị na-adọrọ mmasị na elu ugwu Himalaya. Mgbe ị na-eri nri ehihie na ụlọ oriri na mpaghara, na -azụ igwe foto gị na foto nke magburu onwe ya banyere ugwu. Ị nwere ike ịnụ ụtọ ịnya ịnyịnya na Sonamarg (Nhọrọ). N'ehihie n'ehihie na-esi na Sonamarg gaa Srinagar. N'abalị na-anọ na nkwari akụ.
Na ụtụtụ mgbe nri ụtụtụ, lelee site n'ụgbọ mmiri na ụgbọala gaa na Pahalgam, na-aga eleta ubi Saffron nke Pampora, lee obodo mara mma, ọtụtụ alaka osikapa na Awantipura bibiri n'ụzọ.
Emechara gaa n'ihu na Pahalgam (Ndagwurugwu Ndị Ọzụzụ Atụrụ) site n'ọhịa ọhịa, nkwanye nke iyi ndị na-asọ site na mmiri Lidder na Sheshnag Lake bụ ndị a ma ama maka ịma mma ha mara mma.
Mgbe ị na-eri nri ehihie na ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke mpaghara, gaa n'ihu na-eji bridle na-eri nri gị na foto nke anya dị ebube nke ugwu. Ị nwere ike ịnụ ụtọ ịnya ịnyịnya na Pahalgam (Nhọrọ).
N'abalị na-anọ n'ụlọ nkwari akụ na Pahalgam.
N'ụtụtụ mgbe ụtụtụ gasịrị, lelee ụlọ nkwari akụ ma gaa n'ihu na Gulmarg. Gulmarg (Ngwurugwu nke Ngwongwo) - A chọpụtara ya dịka njem nleta nke ndị Britain na 19th narị afọ. Tupu nke ahụ, ndị eze ukwu Mughal zubere na ndagwurugwu Gulmarg bụ nke dị ihe dịka 03 kms ogologo na elu-na 01 kilomita n'obosara.
Ọ bụ ebe dị iche iche dị na mbara ala nke gbara gburugburu Pir Panjal nke dị n'elu mita 2,730 n'elu elu igwe na otu n'ime ebe ndị njem nleta kachasị ama na Kashmir. O nwekwara otu n'ime ụlọ akwụkwọ green golf kachasị elu nke nwere oghere 18, yana ụlọ nkwonkwo, nke bụ ụlọ ọrụ akụkọ ihe mere eme n'onwe ya. Onye nwere ike ịnụ ụtọ Gondola ma ọ bụ ịnya ịnyịnya na Gulmarg (Nhọrọ)
Maka njem na-atọ ụtọ nke ụdị dị iche iche, nnukwu gulfola Gulmarg rụrụ nke dị elu karịa Gulmarg, site na ndagwurugwu osisi na-adọrọ mmasị. Site na Gulmarg, egwu egwu na-eduga elu na Khilanmarg, Kangdori na isi iyi asaa, awa ole na ole site na pony ogologo ụkwụ.
N'abalị na-anọ n'ụlọ nkwari akụ na Gulmarg.
Na ụtụtụ mgbe nri ụtụtụ, lelee ụlọ nkwari akụ na ụgbọala gaa Srinagar. Mgbe ị bịarutere, lelee ya na Houseboat ma emesị nwee ọhụụ Shikara na-anọ jụụ (Nhọrọ) n'elu ọdọ - Ọ bụ otu n'ime ihe ndị na-enye obi ụtọ na ntụrụndụ nke ezumike na Kashmir.
N'abalị na-anọ n'ụlọ ụgbọ mmiri na Srinagar.
Na ụtụtụ mgbe nri ụtụtụ, lelee ụlọ nkwari akụ na mgbe e mesịrị, a ga-ebuga gị na ọdụ ụgbọ mmiri Srinagar n'oge ị ga-agba ụgbọ elu ịlaghachi.